ISIQITHI SEBRICK KITCHEN (IINGCAMANGO ZOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Isiqithi seBrick Kitchen (Iingcamango zoYilo)
Isiqithi seBrick Kitchen (Iingcamango zoYilo)
Nantsi igalari yethu yoyilo lweziqithi zekhitshi ngezitena, zokuhlamba ezimhlophe zanamhlanje, iterracotta, ukubopha kunye nemibono yezitena.
Izitena zihlala ziyinto eyamkelekileyo nakweyiphi na ikhitshi. Zongeza ubuntu ngakumbi kwizikhewu, zinika imvakalelo efudumeleyo, yerustic kwaye yongeza umaleko wokuthungwa oya kuthi ngokuqinisekileyo uncede ukujonga konke ekhitshini, ngakumbi amakhitshi anamhlanje. Ngelixa izinto zezitena zihlala zifumaneka kwizicelo zodonga, ungazisebenzisa nakwiziseko zekhitshi, izitena zokwenyani okanye ngenye indlela.
Ukutshatisa umxholo omhlophe woyilo lwekhitshi, isiseko se ikhitshi lezitena Isiqithi esingasentla sisebenzisa izitena ezihlanjwe ngekalika. Ukuhlamba ikalika kuthambisa iitoni eziorenji ezomeleleyo zezitena, kwaye zongeza nobume bomphezulu. Iziphumo ziyahambelana ngokugqibeleleyo kunye nokudityaniswa kokugqitywa kwekhitshi.
Isiqithi seFrick Brick Kitchen
I-Antique Brick Isiqithi seKhitshi
Isiqithi seBrick Brick
Ikhitshi kunye neLime Wahed Brick Island
Isiqithi esimhlophe esihlanjwe ngezitena
Isiqithi saseRustic Brick Kitchen
Isiqithi seBrick Kitchen
Isitena sokukhonkxa isiqithi seKhitshi
Kuxhomekeka kwinkangeleko oya kuyo, zininzi iintlobo zezitena onokukhetha kuzo. Umbala kunye nokuthungwa kuyahluka ngokuxhomekeka kwindawo evela kuyo, izixhobo kunye neendlela zokuvelisa. Nazi ezinye zeentlobo eziqhelekileyo zezitena:
Isitena sodongwe - sesona sitena siqhelekileyo, sihlala si-orenji / sibomvu ngombala
Izitena zeLand Lime - ezi zihlala zimhlophe ngenxa yesanti esetyenziselwa le nto
Izitena zempukane ezibhabhayo - ezi zenziwe ngomphunga, isamente, isanti / uthuli lwelitye
Izitena zekhonkrithi ezenziwe ngomxube wesamente kunye nomdibaniso (ngesiqhelo isanti)
Kukwakho neendlela ezininzi zokugqiba ezisetyenziswa kwiziqithi zekhitshi lezitena, ukuyinceda idibanise inkangeleko oyifunayo kwindawo yakho. Ezinye zezona zidumileyo zezi:
Ukupeyinta-ukupeyinta ngaphezulu kwezitena ukongeza ukuhlamba umbala okanye ukugquma ngokupheleleyo izitena ngelixa ugcina ubume bayo bokuqala kunye nepateni
Ukuhlamba ikalika- oku kongeza umphumo omhlophe wokuhlamba / wokuhombisa kwizitena zakho, kodwa xa kuthelekiswa nepeyinti, oku kuhlala ixesha elide ngakumbi kwaye kuyabutyhafisa ubumba bokwenza umhlaba. Oku kuvelisa ubume bendalo ngakumbi
Ukutyabeka, kukwabizwa ngokuba kukutyabeka okumanzi, obu buchule bongeza umaleko kwisitena, kwaye sihlala sisetyenziselwa ukwenza into edlakadlaka.
Ngaphandle kokusebenzisa izitena zokwenyani, iithayile zekhonkrithi kunye neebhodi zegwebu eziyilo lwezitena nazo zezinye iindlela ezintle. Zingabizi (kuxhomekeka apho ukhoyo), kwaye kulula ukufaka. Oku kuluncedo ngakumbi ukuba sele unaso isiseko sekhitshi esele sikhona kwaye ufuna ukongeza umbala wezitena / ubume, ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Zive ukhululekile ukuzama izinto ezahlukeneyo kunye neendlela zokugqiba ukufikelela kwinkangeleko oyifunayo! Apha ngezantsi kukho imizekelo yendlela onokuthi ufake ngayo izitena kwiziqithi zakho zasekhitshini:
Esi siqithi sasekhitshini sisebenzisa izitena ezifanayo nezo zisetyenziswa ezindongeni ukwenza inkangeleko efanayo. Amacala esiseko sesiqithi sasekhitshini enziwa ngezitena ngozinzo, kodwa indawo esembindini yesi siqithi isenziwe ngomthi ukubonelela ngendawo yokugcina. Izitena ezibomvu ezimnyama zongeza uburhabaxa obucocekileyo, ubuhle bangoku bendawo kwaye bayinika inginginya encinci. Inkqubo ye- igumbi lokuhlala lezitena ifaka isitayile esifanayo kuyilo oludibeneyo.
izimvo zebar yegumbi lokuhlala
Olunye ukhetho onokulusebenzisa kwiziqithi zasekhitshini ziithayile zesitena. Kulo mzekelo, iithayile zetena zisebenzisa imibala eyahlukeneyo kunye neetoni ezongeza ubunzulu kunye nezinto ezonwabisayo ngaphezulu. Isagcina umbala wombala wasemhlabeni nangona, uyivumela ukuba idibane nekhabhathi zekhitshi laseWengue.
Izitena zomgunyathi zazisetyenziselwa ukunxiba i-facade yeli bar yokuphakama kwekhitshi yesiqithi. Izitena zinceda ukongeza ukuthungwa kunye neepateni kwindawo engenanto yangoku, ukuyinika ubuntu ngakumbi kunye nokongeza indawo ekugxilwe kuyo kwindawo evulekileyo yekhitshi.
Isiqithi sekhitshi kolu luyilo kulapho kufakwa khona indawo yokupheka ekhitshini, kwaye yenziwe ngesiseko esomeleleyo sezitena kunye nesilayidi esityebileyo se-quartz. Ngentsimbi ehambelana nesando yentsimbi ngaphezulu kwento, isiphumo kukujongwa kwe-rustic yanamhlanje egcwalisa iikhabhathi zekhitshi ezingwevu kwaye yongeza ubume obaneleyo obungagqumli indawo yonke.
Izitena ze-antique kwesi siqithi sasekhitshini zisebenzisa izibopheleli zekhonkrithi, zisinika ithoni engwevu ehambelana nombala weethayile zomgangatho. Ithoni emnyama kunye nehlabathi yomhlaba kwiziqithi zasekhitshini idonsa ukujonga konke kunye kwaye yongeza umnxeba omnandi kuyilo lwangoku lwekhitshi.
Ngokugcina umbala wendalo wezitena zeterracotta, ngokuqinisekileyo isiqithi sasekhitshini simi ngokuchasene neekhabhathi ezimhlophe ezimhlophe. Umbala obomvu obomvu wezitena wongeza i-rustic touch kwindawo kwaye uyinika indawo efudumeleyo.
Indibaniselwano yezitena zeterracotta kunye neplate ye-beige esetyenziswe kwesi siqithi sincinci sekhitshi iyanceda ukuba ibonakale kolu luyilo lwangoku lwekhitshi. Isiseko sezitena sigqibelele ukupheka iihbs kunye nee-oveni ezakhiwe ngaphantsi njengoko kunceda ekugcineni ubushushu ngaphakathi, kwaye ngekhe utshise ngokungafaniyo nomthi.
Izitena zeTerracotta ezidityaniswe nekhabhathi zekhitshi zendalo zinika esi sithuba ukubukeka kwe-rustic yanamhlanje. I-coutnertop emhlophe emhlophe inceda ukuthambisa iitoni ezifudumeleyo zesitena kunye nomthi we-walnut, ukunceda ukugcina ibhalansi kumbala wekhitshi lombala.
izimvo ezizodwa zomtshato wamkelekile
Izitena ezihlanjwe ngekalika ezisetyenziswa kwiziqithi zasekhitshini zongeza into ekhanyayo kule khitshi yesitayile yakudala. Umbala okhanyayo wesiqithi sezitena unceda ukukhulisa iikhabhathi zekhitshi ezinombala omnyama kunye nokulinganisa ukujonga ngokubanzi.
Izitena ezibomvu ezimnyama ezihlanjwe ngekalika ezisetyenziswa kwiziqithi zasekhitshini zongeza ubuqaqawuli be-rustic kwinto eyenye ekhanyayo yoyilo lwekhitshi emhlophe. Umzekelo kunye nokuthungwa kwezitena kuzisa amehlo akho ngakwisiqithi sasekhitshini, esenza ukuba ibe yeyona nto iphambili kwisithuba.
Udaka olumhlophe lwalugalelwe ngaphezulu kwesiseko sezitena sesi siqithi sasekhitshini ukuze sinikezwe ukuhlamba okumhlophe okuqinileyo ngelixa sigcina ubume kunye nephethini yezitena. Umaleko omdaka omhlophe unceda ithoni phantsi kombala wendalo wezitena zeterracotta, ivumela isiqithi ukuba sitshatise umxholo omhlophe mhlophe wendawo.
Izitena ezisetyenziswe kwesi siqithi sasekhitshini zinetoni ebomvu ebomvu ehambelana nethoni yeekhabhathi zekhitshi. Ukuyinika i-aksenti, indawo esembindini yobuso besiqithi sekhitshi yongeza ipateni yesicelo seherringbone, yongeza iintlobo ezahlukeneyo kwiipateni.
Esi siqithi sincinci sekhitshi sisebenzisa izitena ezibomvu ezimnyama ngokwesiseko saso kwaye siphakamisa ngentla yebhloki yamaplanga ukuze sigqibe ukubukeka kwe-rustic. Esi siqithi sasekhitshini sinamacala anokwandiswa xa ufuna indawo engaphezulu yetafile oza kusebenza kuyo-ilungele ukugcina indawo.
Unokukhetha ukupeyinta ngokupheleleyo phezu kwezitena zekhitshi lakho ukuze ulikhangele ngakumbi. Kulo mzekelo, izitena zazipeyintwe kwimaleko embalwa yepeyinti emhlophe, evumela ubume bendalo kunye nepateni yezitena ukuba ize, kodwa igubungele ngokupheleleyo umbala wendalo wezitena. Isiphumo kukujongeka okwangoku okugcwalisa ngokugqibeleleyo iikhabhathi zomthi we-Oak ezisetyenziswa kweli khitshi.
Endaweni yesiqithi esilula sasekhitshini, olu ludonga oluyinyani olupheleleyo oluvala indawo yekhitshi kunye nokukhutshwa kwayo ukusuka kumgangatho ukuya kuphahla kumacala amathathu. Isakhiwo esakhiweyo sonke senziwe ngezitena ezineearingi ezivulekileyo zokujikeleza. Indlela eyahlukileyo yokwenyani yokufaka izitena kwiziqithi zasekhitshini, ekwanceda ukugcina umsi kude nekhitshi, ulikhokelela phezulu ukuya esiphelweni.
Kule khitshi yanamhlanje, kuphela i-facade yesiqithi sasekhitshini eyafakwa ngezitena, kwaye igcina isidumbu esimhlophe somthi sonke isiqithi sekhitshi. Isiphumo sisiqithi sekhitshi esikhangeleka ngokukhanyayo esisenoluvo lwe-rustic oluvela esiphelweni sesitena.
Ukuba unesiqithi sekhitshi esele sikhona, unokukhetha ukongeza isitena esilula kwibala lesiqithi ukongeza umbala omncinci kunye nokuma komphezulu. Oku kunceda ukongeza umbala kuwo onke amakhitshi amhlophe, ngelixa ugcina ukujonga okuthulisiweyo kwendalo okusigcina sisibheno sanamhlanje.
Uyilo olunxulumene ngakumbi ndwendwela igalari yethu ye izimvo zomgangatho wezitena .
iibhloko zomngxuma womlilo
ilokhwe yomtshato emhlophe neblue
kufuneka uyigcine nini le mihla
iingoma zabakhonzazana ukuba behle ezantsi apha